တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြေပြိုရာ အလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံး – Eleven Media Group
တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြေပြိုရာ အလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံး
တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားသဖြင့် အလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မေ ၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မေ ၃ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် တွံတေးမြို့နယ် အိုးဖိုအနောက်ရပ်ကွက် ကမ်းနားပိုင်းရှိ တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ဆောင်ရွက်စဉ် မြေပြိုပိကျပြီး အမျိုးသားနှစ်ဦး ပိနေကြောင်း သတင်းရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အဆိုပါနေရာ၌ ပိုင်ရိုက်၊ သဲဖို့ခြင်း လုပ်ကိုင်နေသူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေ ကို….(၃၀ နှစ်) နှင့် တွံတေးမြို့နယ်နေ ကို….(၂၄ နှစ်)တို့မှာ မြေများပြိုပိကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေစဉ် မြေပြိုကျသဖြင့် ပိမိခဲ့သူနှစ်ဦးအနက် ကို….(၃၀ နှစ်) မှာ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကို….(၂၄ နှစ်) မှာလည်း ၀မ်းဗိုက်ရောင်ရမ်း ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် တွံတေးဆေးရုံမှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းကုသထားရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Posted in NewsTagged တွံတေးတူးမြောင်း
တွံတေးတူးမြောင်း ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကိုရီးယားချေးငွေ ဒေါ်လာသန်းခြောက်ဆယ်ကျော်ဖြင့် ခြောက်နှစ်တာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်
တွံတေးတူးမြောင်း ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကိုရီးယားချေးငွေ ဒေါ်လာသန်းခြောက်ဆယ်ကျော်ဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါ တွံတေးတူးမြောင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁ ဒသမ
တွံတေးတူးမြောင်းအတွင်း ရပ်တန့်ထားသည့် သင်္ဘောပေါ်သို့တက်ပြီး ပစ္စည်းများ လုယက်သူ နှစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် တွံတေးတူးမြောင်းအတွင်း
တိုးမြစ်မှ ရေစီးဝင်နှုန်းများမှုကြောင့် ကမ်းပြိုမှု နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တွံတေးတူးမြောင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းခွဲခြောက်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ
တိုးမြစ်မှ ရေစီးဝင်မှုနှုန်းများပြားမှုကြောင့် ကမ်းပြိုမှုများနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တွံတေးတူးမြောင်းကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းခွဲခြောက်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရေအရင်းအမြစ် နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိပါသည်။ တွံတေးတူးမြောင်း ၃.၅မိုင်ရှိ အကောက်စခန်းနှင့် လက်ပံကုန်းကျေးရွာအနီး ကမ်းပါးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းခွဲခြောက်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ပံကုန်းကျေးရွာဘက်တွင် လုပ်ငန်းလေးခု
တွံတေးတူးမြောင်း ရေလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်ရေး ကိုရီးယားချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ကျော်ဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည်
တွံတေးတူးမြောင်း ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကိုရီးယားချေးငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ကျော်ဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။ တွံတေးတူးမြောင်းသည် အရှည်အားဖြင့် ၂၁ မိုင်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများဖြစ်သည့်